Sheekooyinka been abuurka ah ee coronavirus laga sameeyay - Ka hortagga Korona
Kiisas yar oo fayraska ah ayaa ilaa iyo haatan laga soo sheegay Afrika, balse dowladaha dalaka Afrika qaarkood ayaa weli la daalaa dhacaya been abuur laysla dhex marayo oo caabuqa ku saabsan.
1. Maya, uma baahnid inad garka iska xiirto si aad caabuqa isaga ilaalisid
Sawir hore oo waaxaha caafimaadka Mareykanka ay u adeegsadeen xiriirka ka dhaxeeya tinta wejiga ka soo baxda iyo neef-mareenka ayaa loo adeegsaday in ragga looga digo inay garka iska xiiraan si uusan caabuqu ugu dhicin.
Wargeyska Punch ee ka soo baxa Nigeria ayaa cinwaankan qoray: “Si aad uga badbaaddo coronavirus, iska xiir garka”
Sawirka Xarunta Mareykanka ee Xakameynta Cudurrada (CDC) ayaa muujinaya tusaalooyin badan oo ku saabsan tinta wejiga ka soo baxda iyo kuwa ay yihiin in laga fogaado marka la xiranayo maaskarada wejiga ee neefsashada.
Sawirku waa mid jira- balse waxaa la sameeyay sanadkii 2017 (kahor inta uusan dillaacin coronavirus) balse CDC haatan ugama digeyso dadka inay garka iska xiiraan.
2. Wadaad u dhashay Nigeria oo sheegtay inuu la dagaallamayo coronavirus
Wadaad Diinta Masiixiga ah oo sheegtay inuu daaweyn karo fayraska ayaa sidoo kale faafiyay wax khaldan.
Sheekooyinka la xiriira David Kingleo Elijah ayaa ku baahay barta Internet-ka kaddib markii ay dadku isla wadaageen muuqaal uu ku sheegayo inuu aadayo Shiinaha si uu uga “takhaluso ” fayraska kaasoo lagu baahiyay barta YouTube.
“Waxaan doonayaa inaan cirribtiro coronavirus. Waxaan u socdaa Shiinaha, waxaan doonayaa inaan ka takhaluso coronavirus,” ayuu ku yiri muuqaalka.
Maalmod yar kaddib, waxaa soo baxay warar sheegaya inuu u safray Shiinaha kaddibna isbitaal la dhigay kaddib markii uu isaga qudhiisa ku dhacay caabuqa. Meelaha wararkan lagu faafiyay ayaa wadaadka ugu yeera magac kale – Elija Emeka Chibuke.
Sawirka loo adeegsaday in lagu muujiyo isaga oo isbitaal ku jira waa sawirka Adeshina Adesanya, oo ah jilaa Nigeria u dhashay oo loo yaqaanno Pastor Ajidara, oo isbitaal ku dhintay sanadkii 2017.
3. Warar been ah oo laga faaifiyay taksiile
Sheeko ku saabsan darawal Nigeria u dhashay oo soo qaada nin qaba caabuqa coronavirus ayaa lagu faafiyay baraha bulshada waxaana isla wadaagay dadka isticmaala WhatsApp – balse waa been.
Sida lagu sheegay farriimaha ay dadku isla wadaageen, taksiilaha ayaa soo qaaday “nin caddaan ah” oo qaba caabuqa coronavirus wuxuuna geeyay meel dadka lagu karantiilo. Dowlad-goboleedka Ogun ayaa kaddib ku amartay darawalka inuu istibaalka tago.
Waxaa la sheegay in darawalka laga helay caabuqa coronavirus – balse uu ka baxsaday isbitaalka kaddibna uu ku hanjabay inuu faafin doono fayraska haddii aan qoyskiisa la siin 100m oo naira ah una hdiganta ($274,000).
Warkan ayay dowladdu beenisay.
Dowlad-goboleedka Ogun ayaa beenisay warka ku xusan qoraalka, iyagoo sheegay inuusan jirin bukaan ka baxsaday xarunta dadka lagu karantiilo.
Qoraalkii ugu horreeyay waxaa lagu soo daabacay akoon been abuur ah oo laga sameeyay telefishinka gaarka loo leeyahay ee Africa Independent Television (AIT), kaasoo beeniyay inay akoonkaas ku leeyihiin barta Facebook.
Waxaa qoraalka la raaciyay sawirka darawalka oo lagu sheegay Adewale Isaac Olorogun. Si kastaba, isla sawirkaas ayaa lagu daabacay Buzzfeed waxaana looga hadlay Libya iyo qof lagu sheegay magaca – Jude Ikuenobe.
Nigeria oo ah dalkii ugu horreeyay ee ka tirsan dalalka Saxaraha Afrika ka hooseya ee laga helo caabuqa, ayaa kiiskii ugu horreeyay waxaa laga helay nin Talyaaniga u dhashay oo tegay magaalada Lagos 25-kii February.
Dowladda dalkaas ayaa sheegtay in tirada dadka uu ninkaasi xiriirka la sameeyay ay gaartay 100 qof.
4. Cod loogu talo galay tababar laga bixinayay Kenya ayaa walaac abuuray
Gudaha Kenya, dowladda ayaa soo saartay warsaxaafadeed ay ku beenineyso “warka been abuurka ah” ee ku saabsan coronavirus, waxaana ku jiray cod la soo duubay, oo la iskula wadaagay WhatsApp, kaasoo lagu sheegay inuu yahay war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda.
Codka ayaa lagu sheegay in ilaa 63 kiis laga soo sheegay dalkas, taas oo been ah. Ilaa iyo haatan ma jiraan kiisas laga soo sheegay Kenya.
Dadka Kenya ayaa wajahaya ganaax dhan $50,000 (£39,000) amaba labo sano oo xabsi ah haddii lagu helo war been abuur ah oo ku saabsan caabuqa.
Dalka Nigeria, wadaad ayaa soo dhigay muuqaal uu ku sheeganayo in maraqa basbaaska uu daawo u yahay coronavirus. Arrintan ayaa sidoo kale la iskula wadaagay WhatsApp.
Weli ma jirto daawo loogu talo galay caabuqa coronavirus wadaadkuna ma sheegayo faa`iidooyinka ku jira maraqa basbaaska – oo aad looga isticmaalo NIgeria.
Xuquuqda maqaalkan waxaa iska leh BBC-Somali oo aan ka so qaadanay: https://www.bbc.com/somali/war-51789603
← Wiil 11-sano-jir-ah oo ku guuleystay abaalmarinta $1,000 ee Tartanka Wacyi-gelinta Cudurka Covid19 → Muqdisho: Qofki ugu horeeyay oo u dhintay cudurka Corona iyo bulshada dhexdeeda oo uu ku faafay